थाहा छ ? जहिले यति सानो सानो कुरामा झगडा गर्छन दिदी-बहिनी करीना र करिश्मा – ताजा समाचार
थाहा छ ? जहिले यति सानो सानो कुरामा झगडा गर्छन दिदी-बहिनी करीना र करिश्मा
एजेन्सी-बलिउडका चर्चित दिदी बहिनीहरु हुन करिना कपुर र करिष्मा कपुर । यि दीदी बिहनी बिच अत्यन्तै माया प्रेम छ तर सानो सानो कुरामा पनि झगगडा भइरहन्छ । भन्ने गरिन्छ, जहाँ प्रेम हुन्छ, त्यहाँ झगडा पनि।
यस्तै करिना र करिश्माका बीचमा पनि हुने गर्दछ। यी दुई दिदीबहिनीको झगडा बिशेष गरी जिन्स कपडामा हुने गर्छ । करिश्माले यो कुरा एक शोमा खुलासा गरेकी थिइन्। उनले दुबै दिदीबहिनीको नजर एक अर्काको जिन्समा हुने गर्दछ। उनले भनेकी छिन्, हामी दुबैलाई एकअर्काको जिन्स मन पर्ने गर्दछ।